အနုပညာကဏ္ဍ Archives - MM Live News
လူမှုကှနျ​ယကျ​မှာ အရမျးကို နာမညျ​ကွီး​နတေဲ့ ဒါရိုကျ​တာ ညိုမငျးလှငျ​ ရိုကျ​ကူးသှားမယျ့​ မွမွရုပျ​ရှငျ​ဇာတျ​ကားကွီးရဲ့ အဓိကမငျးသားက​တော့ တရားဝငျ​ ထှကျ​​ပျေါလာခဲ့ပါပွီ။ အားလုံးက မထငျ​မှတျ​ထားတဲ့ မွမွရုပျ​ရှငျ​ရဲ့ အဓိက မငျးသားက​တော့ Myanmar Idol Season3ရဲ့ Winner ဆုရှငျ​ ပရိသတျ​အခဈြ​​တျော​ ​လေး ဖွိုးမွတျ​​အောငျ​ပါတဲ့​နျော​။ အဆိုပါသတငျးကိုကွားကွားခငျြး ပရိသတျ​​တှအေကုနျ​လုံးက အရမျးကို အံ့အားသငျ့ခဲ့ကွရတာပါ​နျော​။ မွမွဇာတျကားနဲ့ ပတျသတျပွီး ဖွိုးမွတျအောငျက “မငျးသမီးနဲ့ ထိရဖကျရမယျ့ အခနျးတှပေါလာရငျ ကနြျောမကိုငျရဲဘူး၊ မငျးသမီးနဲ့ ဆုံရမယျ့အခနျးနညျးပမေယျ့ ဒါရိုကျတာ ညှနျကွားတဲ့အတိုငျး သရုပျဆောငျသှားမှာပါ” လို့ပွောလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီဇာတျကားကိုကွားကွားခငျြး အရငျဆုံး အမနေဲ့ စဈခငျးခဲ့ရတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးလေးလဲ ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ မငျးသမီးခြောလေး သငျဇာနဲ့ အတူ တှဲဖကျသရုပျဆောငျမယျ့ ဖွိုးမွတျအောငျရဲ့ […]
မွေးနေ့မှာ မိဘကို ပိုက်ဆံပုံကြီးနှစ်ပုံ နဲ့ ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်
အသက်၂၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ မိဘကို ပိုက်ဆံပုံကြီးနှစ်ပုံ နဲ့ ကန်တော့ ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် ရဲ့ VIDEO ဖိုင် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ် ပိုင်တံခွန် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ပိုင်တံခွန်က မော်ဒယ်လ် အလုပ်အပြင် သူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေရှိတာကြောင့် သူ့ကို အားပေးချစ်ခင်တဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုင်တံခွန် ရဲ့မွေးနေ့ မှာ မိဘတွေကို များပြားလှတဲ့ ပိုက်ဆံများနဲ့ ကန်တော့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန် က ခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုအောင်မြင်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက ထိုင်နိုင်ငံမှာပါ ကြော်ငြာများ လက်ခံရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲများနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာလည်း ရိုက်ဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်းနဲ့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် တို့သရုပ်ဆောင် […]
ဟာသသရုပ်ဆောင်မကစ်ကစ်အရေးပေါ်ဆေးရုံထပ်တင်ထားရပါတယ်…ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်အနီးကပ်ဘာမှမကူညီနိုင်လို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာ… အခြေနေကတော့အဆုပ်ထဲရေတွေထပ်ဝင်နေုပြီးအမောဖောက်နေပါတယ်…ပင်လုံဆေးရုံမှတဆင့် သင်္ဃန်းကျွန်းဆေးရုံ သင်္ဃန်းကျွန်းဆေးရုံမှတဆင့် ရန်ကုန်အရေးပေါ်ဆေးရုံကြီးမှာတင်ထားရပါတယ်… ခါးကနေရေဖောက်ပေးပေမယ့်ရေနဲ့သွေးတွေကရောနေပြီး ဆရာဝန်ပြောပြချက်အရ အတွင်းကပျက်စီးနေပြီဖြစ်တာကြောင့် လူနာကိုပိုပြီးဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အချိန်မရွေး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်… အနုပညာမောင်နှချင်း ကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာအသက်ကယ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာကြာမှာ မို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်…အဝေးကနေကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာကပရဟိတညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပေးရုံရှိပါတော့တယ်ဗျာ… ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ…ကျွန်တော်တင်တဲ့Post အောက်မှာ အနုပညာရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကို ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့စကားလုံးတွေမရေးကြပါနဲ့ခင်ဗျ.ကုသိုလ်ပဲယူကြပါ…အကုသိုလ်ကိုမယူုကြပါနဲ့… တေးရေးမင်းကို ( ခ) မင်းခေတ်မင်း အနုပညာသစ်ပြတိုက်ဖောင်ဒေရှင်း 1.5 .2019 UNICODE ဟာသသရုပျဆောငျမကဈကဈအရေးပျေါဆေးရုံထပျတငျထားရပါတယျ…ကြှနျတျောကဘနျကောကျရောကျနတေဲ့အတှကျအနီးကပျဘာမှမကူညီနိုငျလို့ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးကွပါဦးခငျဗြာ… အခွနေကေတော့အဆုပျထဲရတှေထေပျဝငျနေုပွီးအမောဖောကျနပေါတယျ…ပငျလုံဆေးရုံမှတဆငျ့ သင်ျဃနျးကြှနျးဆေးရုံ သင်ျဃနျးကြှနျးဆေးရုံမှတဆငျ့ ရနျကုနျအရေးပျေါဆေးရုံကွီးမှာတငျထားရပါတယျ… ခါးကနရေဖေောကျပေးပမေယျ့ရနေဲ့သှေးတှကေရောနပွေီး ဆရာဝနျပွောပွခကျြအရ အတှငျးကပကျြစီးနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ လူနာကိုပိုပွီးဂရုစိုကျရမယျဆိုတဲ့အကွောငျး အခြိနျမရှေး အသကျအန်တရာယျစိုးရိမျရတယျဆိုတဲ့အကွောငျးပွောထားပါတယျ… အနုပညာမောငျနှခငျြး ကြှနျတျောရှိတဲ့အခြိနျမှာအသကျကယျနိုငျပမေယျ့ ကြှနျတျောကဘနျကောကျမှာကွာမှာ မို့ စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ…အဝေးကနကြှေနျတျောလုပျပေးနိုငျတာကပရဟိတညီအဈကိုမောငျနှမတှေ ကူညီပေးကွဖို့မတ်ေတာရပျခံပေးရုံရှိပါတော့တယျဗြာ… ကွိုတငျတောငျးပနျပါရစေ…ကြှနျတျောတငျတဲ့Post အောကျမှာ အနုပညာရှငျမငျးသားမငျးသမီးတှကေို ပုတျခတျစျောကားတဲ့စကားလုံးတှမေရေးကွပါနဲ့ခငျဗြ.ကုသိုလျပဲယူကွပါ…အကုသိုလျကိုမယူုကွပါနဲ့… တေးရေးမငျးကို ( ခ) မငျးခတျေမငျး အနုပညာသဈပွတိုကျဖောငျဒရှေငျး […]
ဒီနေ့မှာတော့ ဝေဖန်မှုတွေ များနေတဲ့ စည်ဖြိုးကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျားပေါက်ရဲ့ Reggae Buddha ဆိုတဲ့ ပန်ချီကားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့သတင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…. စည်ဖြိုးက ခုလို Post တင်ထားပါတယ်…. “ကိုယ်လေးစားအားကျ ရတဲ့ Artist ရဲ့ လက်ရာကို ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ဟာ ကျွန်တော့်အိမ်မက်တစ်ခုပါ .. Reggae Buddha ဆိုတော့ ကျွန်တော့်လို Buddhist Rasta အတွက် ရည်ရွယ်တာ.. ကျွန်တော့် BoomBox Recording studio မှာချိတ်ဖို့အတွက်…ကိုကျားဆီမှာ သွားယူဖြစ်ခဲ့တယ် … တရားအကြောင်းလည်းပြောဖြစ်ကြတယ်… ကိုယ့်ကိုလည်း ညီအကိုလို တစ်ကယ်ချစ်တဲ့အကိုတစ်ယောက်ပါ .. မေတ္တာ ကြီးပါတယ်…အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ချစ်ကြပါ .. 🙏🏻❤️✌🏻 #SiPhyo #Respect #Love #Peace” […]
လတ်တလော ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ “ဆက်ပက်” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ကျာ်ကျော်နန္ဒကတော့ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဖက်ရှင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ ထိုးဖောက်လာသူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ လတ်တလောမှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးလည်းးဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို အဆက်အပြတ် လုပ်ဆောင်ပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ ၅ လပိုင်းမှာ ကျရောက်တော့မယ့် သူ့ရဲ့ မွေးနေ့အကြိုပွဲအတွက် အရမ်းမိုက် အရမ်းလန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သီချင်း MTV တစ်ပုဒ်ကို မျှဝေ ပေးလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ဆိုပြီး အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပီပြင်အသက်ဝင်အောင် သရုပ်ဆောင်ပြသပေးထားခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ MTV ကိုမျှဝေပေးလာခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ ” […]
စင်ပေါ် သီချင်းဆိုနေချိန် အတင်းဖက်နမ်းခံလိုက်ရတဲ့ နီနီခင်ဇော် ဗီဒီယိုဖိုင် …
အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ အမိုက်စားသီချင်းတွေကို Mood အပြည့်နဲ့ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်မလေး နီနီခင်ဇော်ကတော့ အမြဲလိုလို ဆန်းသစ်တဲ့ အနုပညာနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နီနီခင်ဇော်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားပြုတေးသံရှင်တစ်ဦးအဖြစ် နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဆုတွေရယူသိမ်းပိုက်ပေးနိုင်ခဲ့သလို တေးသံရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန်တစ်ဦးအစြဖ်လည်း ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သီချင်းလေးတွေဟာ ခံစားချက်တွေကို ထိရှစေလာက်အောင် အဓိပ္ပာယ်ရှိလွန်းပြီး အရမ်းကို ရေပန်းစားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ နီနီခင်ဇော်ကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ကိုရီးယားသင်္ကြန်မှာ မြန်မာပရိသတ်တွေကိုသွားရောက်ဖျော်ဖြေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နီနီခင်ဇော်ကတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ တခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေနေရင်း နီနီခင်ဇော်ကတော့ ပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ စင်ပေါ်တက် ဖက်နမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ကိုရီးယားသင်္ကြန်မှာဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။celefamily Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ အမိုကျစားသီခငျြးတှကေို Mood အပွညျ့နဲ့ သီဆိုလရှေိ့တဲ့ အဆိုတျောမလေး နီနီခငျဇျောကတော့ အမွဲလိုလို […]
ပရိသတ်​​တွေရဲ့ စ်ိတ်​ဝင်​စားမှုကို အပြည့်​အဝရရှိခဲ့တဲ့ Myanmar Idol Season (3) ပြိုင်​ပွဲ ကြီးရဲ့ Winner ဆုရှင်​ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​က​တော့ ရိုးရိုး​အေး​အေး​နေထိုင်​တတ်​သူတစ်​ဦးမို့ ပရိသတ်​​တွေက အချစ်​ပို​နေကြရတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​က သူ့ကို ရုပ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ​ဝေဖန်​တိုက်​ခိုက်​​နေတဲ့သူ​တွေကို Live လွှင့်​ပြီး တုန့်​ပြန်​လိုက်​တာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ရုပ်​အလှထက်​ စိတ်​အလှကိုသာ ပြင်​ဆင်​ကြဖို့ ​ပြောသွားတဲ့ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​ရဲ့ စကားလုံး​တွေက​တော့ တကယ့်​ကို အနှစ်​​တွေချည်းပါပဲ​နော်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ရုပ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ​ဝေဖန်​ပုတ်​ခတ်​သူ​တွေကို ပညာ​သားပါပါ တုန့်​ပြန်​လိုက်​တဲ့ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​ရဲ့Live ဗီဒီယို​ကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ ရုပ်​ရည့်​ပတ်​သတ်​ပြီး အမြဲတမ်း အ​ပြောခံ​နေရ​တော့ြ​ဖိုးမြတ်​​အောင်​လည်းြ​ငိမ်​​နေနိုင်​​တော့ပါဘူး။ရုပ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ​ဝေဖန်​ပုတ်​ခတ်​သူ​တွေကို ပညာ​သားပါပါ တုန့်​ပြန်​လိုက်​တဲ့ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​ရဲ့Live ဗီဒီယို… Myanmar Idol Season (3) ပြိုင်​ပွဲကြီးအပြီးမှာ​တော့ […]
MRTV4ရုပ်သံလိုင်းမှာ ည(၈)နာရီကျော်ဆိုတာနဲ့ ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရတဲ့ “ကျွန်မက မဟေသီ” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက အဓိက ပဲ့ကိုင်ရှင် မိန်းမချော လို့ခေါ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သံသာမိုးသိမ့်က သူမရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားသူလေး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ ပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ ဗီလိန်ကာရိုက်တာက ပရိသတ်တွေကြား ပြောစမှတ်တွင်ပြီး အသိအမှတ်ပြုခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်စွာ ညတိုင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ “ကျွန်မက မဟေသီ” ဇာတ်လမ်းတွဲ ဇာတ်သိမ်းတော့မယ့် နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်မက မဟေသီ” ဇာတ်လမ်းတွဲ က အပိုင်း(၁) ကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးစောင့်ကြည့်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဒီကနေ့ အပိုင်း(၄၃) မှာ ဇာတ်သိမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်မက မဟေသီ” […]